Kaluumaysatada Bender-bayla oo ka cabanaya agab la?aan duufaantii dhowaan kadib (Dhegeyso) – Radio Daljir
Diseembar 22, 2013 3:21 b 0
Bender-bayla, December 22, 2013 – Kaluumaysata xeebaha gobolka Bari ee Puntland ayaa ka cabanaya agab la?aan baaxad leh oo haysata, taas oo dib u dhigtay howlihii shaqo ee ay wateen.
Deegaanka Kulule ee gobolka Bari ayaa kaluumaysatu waxay ka cabanayaan inaysan haysan adeegyo ku filan oo ay ku kaluumaystaan.
Cabdirisaaq Yuusuf Maxamed oo ka mid ah kalluumaystada deegaanka ayaa daljir u sheegay in duufaantii dhowaan ku dhufutay xeebaha ay saamayn adag ku reebtay, xirfadlayda deegaanka oo ay qalabka ka bur burisay.
Mudane Cabdirisaaq ayaa ka dalbaday hay?adaha gargaarka iyo dowladda Puntland inay qaadaan talaabo gargaar lagu gaarsiinayo dadka u baahan ee deegaanka jooga, isagoo ka codsaday hay?addaha inay qalabka ka taageeraan.
Deegaanka Kulule oo hoostaga degmada Bender-bayla ee gobolka Karkaar ayaa dhibaato baaxad leh waxaa ku reebtay duufaanta Tropical Strom, kalluumaysatada ayaa qalab badan ku waayey duufaanta xeebaha.
Dhegeyso: – Cabdirisaaq Yuusuf oo u waramay jaamac Cabdiraxmaan oo daljir ka tirsan
Baahin: Axad, 22- Dec, 2013 -Caawa Iyo Daljir Weriye Cabdifataax Cumar Geeddi ~ Daljir ~ Garoowe